Cabdi Iley ‘oo isku dayey inuu xabsiga ka baxsado. – Xeernews24
Cabdi Iley ‘oo isku dayey inuu xabsiga ka baxsado.
19. Oktober 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Daawo Cabdi Iley oo surwaalku kasii dhacayo
Cabdi Iley ayaa la soo xidhay kadib rabashadihii dalka Ethiopia ka dhacay bishii August ee sannadkan.
Booliska ayaa maanta maxkamadda federaalka Ethiopia, oo markii shanaad soo taagey Cabdi Iley, u sheegay inuu isku dayey inuu ka baxsado daaqadda xabsiga.
“Sababo la xidhiidha walaac laga qabo ammaankiisa iyo caafimaadkiisa, waxaa lagu hayey xafiis gooni ah, si kastaba, waxa uu isku dayey inuu ka baxsado xafiiska, isaga oo jebiyey muraayadda dariishadda, isaga oo sidoo kalena ceejiyey mid ka mid ah ilaalada” ayey booliisku ay yidhaahdeen.
Si kastaba, Cabdi Iley ayaa falkaas ka hor beeniyey maxkamadda, isaga oo sheegay in warka kasoo baxay booliska uu yahay mid aan jirin, oo qorshaha laga leeyahay uu yahay in lagu baneysto in jidhdil loo geysto islamarkaana sumcaddiisa la waxyeeleeyo.
“Arrintan waa been, aniga shaqsi ahaan waxaa la igu hayaa cadaadis aad u weyn, waxaana la igu hayaa xabsi aan munaasab ahayn, laba mar ayaa nafteeda halis gashay oo nin maskaxda ka jiran oo lagu hayo qol igu dhegan uu iisoo jebiyey albaabka” ayuu yidhi Cabdi Iley.
Cabdi Iley ayaa dib maxkamadda loogu soo celin doonaa 29-ka bishan, kadib markii boolisku codsadeen 10 maalmood oo ay ku sameeyaan baadhitaan dheeraad ah, maxkamaduna ay ka ogolaatay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/Iley.jpg 469 474 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-10-19 17:57:452018-10-19 18:59:52Cabdi Iley ‘oo isku dayey inuu xabsiga ka baxsado.
Waligaa hal mar ma aqrisatay qudbadii Sadam Xuseen ee ugu dambeysay? (Waxay... Xildhibaan Zakariye oo ku dhaqaaqay talaabo Soomaalinimo